चर्काे आलाेचनापछि नेकपा नेताहरुको गलाबाट हट्यो ‘कोरोना जन्तर’ ! - Sidha News
चर्काे आलाेचनापछि नेकपा नेताहरुको गलाबाट हट्यो ‘कोरोना जन्तर’ !
काठमाडौं। चौतर्फी विवाद र आलोचनापछि नेकपाका नेताहरुले भाइरस ब्लकर कार्ड लगाउन छाडेका छन् । कोरोनाको भाइरसबाट जोगिन लाभदायी हुने भन्दै असार १० गते नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकमा यो कार्ड वितरण गरिएको थियो।
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायत शीर्ष नेताले स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको समयमा गलामा यो कार्ड भिरेर बसेका थिए । नेकपा नेताहरुले लगाएको यो कार्डलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना र विरोध भएको थियो ।
चिकित्सा विज्ञानले प्रमाणित नगरेको विषयमा नेताहरुले नै अन्धविश्वास फैलाउने कार्ड सर्वसाधारण जनतालाई झुक्याएको आरोप लागेपछि नेताहरुले यो कार्ड फालेका हुन् । मंगलबारको बैठकमा अधिकांश नेताले त्यो कार्ड फालेका हुन्। बैठकमा सहभागी एक स्थायी कमिटी सदस्यले मंगलबारको बैठकमा नेताहरुले कार्ड नलगाएको जानकारी दिए।
स्थायी कमिटी सदस्य मुकुन्द न्यौपानेले गलामा भिरेको कार्डलाई ‘कोरोना जन्तर’ भनेर नामाकरण गरेका थिए । त्यस लगत्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भाइरस राेकथामका लागि कुनै ब्लकर कार्ड नबनेकाे बताएकाे थियाे।